IMonsanto, i-EPA, i-Roundup, i-glyphosate, ukudla, umdlavuza, amacala, izibulala-zinambuzane
Imibuzo mayelana nokuhlanganiswa kwe-EPA-Monsanto okuphakanyiswe ezinkantolo zomdlavuza
Posted on February 14, 2017 by UCarey Gillam
Ukufakwa enkantolo okusha kwenzelwa inqwaba yabantu ababanga ukuthi i-Roundup herbicide kaMonsanto Co ibanikeze umdlavuza kufaka imininingwane ngemizamo yezinsolo ezenziwa yi-Environmental Protection Agency ukuvikela izintshisekelo zeMonsanto nokusiza ngokungafanele imboni yezolimo.
Ukufakwa, eyenziwe ngasekupheleni kukaLwesihlanu ngabameli bommangali, kufaka phakathi lokho abameli abamele ukuthi kuyizincwadi ezivela kusosayensi we-EPA weminyaka engama-30 osola isikhulu esiphezulu se-EPA uJess Rowland ngokudlala "imidlalo yakho yokuzibandakanya kwezepolitiki nesayensi" ukuze kuvunyelwe abenzi bezibulala-zinambuzane ezifana neMonsanto. URowland ubheke ukuhlolwa komdlavuza we-EPA we-glyphosate, isithako esiyinhloko emikhiqizweni yokubulala ukhula kaMonsanto, futhi wayengumbhali ophambili wombiko othola ukuthi i-glyphosate kwakungeke kube yi-carcinogenic. Kodwa kule ncwadi, isazi sesikhathi eside se-EPA isazi sezobuthi uMarion Copley ucaphuna ubufakazi obuvela ezifundweni zezilwane futhi uyabhala: “Kuyiqiniso ukuthi i-glyphosate ibangela umdlavuza.”
Abameli babamangali benqabile ukusho ukuthi bakuthola kanjani izincwadi, ebhalwe ngoMashi 4, 2013. Usuku lwencwadi luza ngemuva kokuba uCopley eshiye i-EPA ngo-2012 futhi ngaphambi nje kokuthi abulawe ngumdlavuza webele eneminyaka engama-66 ngoJanuwari 2014. Usola uRowland ngokuthi "unabasebenzi abasabisayo" ukuze bashintshe ubika ukuthi uyayithanda imboni, futhi ubhala ukuthi ucwaningo lwe-glyphosate, isithako esiyinhloko ku-Roundup kaMonsanto, lukhombisa ukuthi umuthi wokubulala izinambuzane kufanele uhlukaniswe "njenge-carcinogen yabantu." I-International Agency for Research on Cancer, ingalo yeWorld Health Organisation, imemezele okuningi - ukuthi i-glyphosate iyi- kungenzeka i-carcinogen yomuntu - ngoMashi 2015 ngemuva kokubukeza izifundo eziningi zesayensi. IMonsanto isinqabile leso sigaba futhi inyukile umkhankaso wokwehlisa isithunzi Ososayensi be-IARC.
Ukuxhumana, uma kuyiqiniso, kungaba yintuthuko eqhumayo ezinkantolo zezifundazwe eziningi zeqhwa manje ezibandakanya abamangali abangaphezu kwama-60 abavela e-United States abasola iMonsanto ngokumboza ubufakazi bokuthi i-Roundup herbicide ingadala umdlavuza. Abamangali, bonke abahlushwa yi-non-Hodgkin lymphoma (NHL) noma balahlekelwe othandekayo yi-NHL, bagomela ezinkantolo zakamuva ukuthi iMonsanto inethonya elikhulu ngaphakathi kweHhovisi Lezinhlelo Zezibulala-zinambuzane ze-EPA (OPP), futhi ibinobudlelwano obuseduze ikakhulukazi kuRowland, okwaze kwaba ngonyaka odlule owayeyiphini lomqondisi wesigaba ngaphakathi kwesigaba semiphumela yezempilo ye-OPP. URowland uphathe umsebenzi wososayensi abahlole imiphumela yezempilo yabantu yokuchayeka izibulala-zinambuzane ezifana ne-glyphosate futhi ungusihlalo we-EPA's Cancer Assessment Review Committee (i-CARC) enqume ukuthi i-glyphosate "ayinakubanga umdlavuza kubantu." URowland ushiye i-EPA ngo-2016 ngemuva nje kwekhophi ye- umbiko we-CARC yadalulwa futhi yacashunwa yiMonsanto njengobufakazi bokuthi ukuhlukaniswa kwe-IARC kunamaphutha.
Abameli babamangali bafuna ijaji lombuso kuleli cala ukuphakamisa uphawu emibhalweni echaza ukusebenzisana kweMonsanto neRowland maqondana nokuhlolwa kokuphepha kwe-EPA kwe-glyphosate. IMonsanto yaguqula imibhalo lapho itholakala kodwa yababhala “njengeyimfihlo,” igama labameli babamangali bathi akulungile. Bafuna nokususa uRowland. Kepha iMonsanto ne-EPA bayaziphikisa izicelo, imibhalo yasenkantolo iyakhombisa. URowland akatholakalanga ukuba aphawule, i-EPA yenqabile ukuphawula ngezindaba zasenkantolo.
"Abamangali banesidingo esikhulu sobufakazi bukaMnu. Rowland bokuqinisekisa ubudlelwano bakhe noMonsanto kanye neqhaza elibalulekile le-EPA ekuvikeleni ibhizinisi lommangalelwa…" kubameli babamangali babhala ngoFebhuwari 10 ukufaka icala enkantolo yezifunda ezahlukahlukene, ehlanganiswe iNkantolo yesiFunda sase-US yesiFunda esiseNyakatho neCalifornia. “Mnu. URowland usebenze ngaphansi kwethonya leMonsanto ukudala isikhundla ne-EPA yokushicilela ukuxhasa ibhizinisi likaMonsanto. ”
I-EPA ichithe iminyaka embalwa edlule ihlola isimo se-glyphosate yezempilo nezokuphepha kwemvelo njengoba impikiswano yomhlaba wonke isanda. I-ejensi yayihlelile ukuqeda ukuhlolwa kwayo kobungozi ku-glyphosate ngonyaka we-2015; wabe esethi izoqedwa ngo-2016; wabe esethi kuzoqedwa ngekota yokuqala yonyaka wezi-2017. Manje i-ejensi ithi inethemba lokuthi uma sekuphele ikota yesithathu yonyaka ka-2017 izobe isiphothuliwe.
IMONSANTO IFUNA IMIBHALO IYAFIHLA IMFIHLO
Emzamweni wokumisa ukukhishwa kweminye imibhalo eqalekisayo, abameli bakaMonsanto ngoMsombuluko bacele ijaji lombuso ecaleni leRoundup ukuthi livimbe abameli babamangali ukuthi bangafaki amakhophi amadokhumende abawatholile ngokutholwa njengombukiso enkantolo ngoba amalungu e umphakathi nabezindaba ungababona. Bamele ukuthi abameli babamangali babezama ngokungafanele “ukuzama leli cala enkantolo yombono womphakathi.” IMonsanto yakhononda ngqo ukuthi inhlangano engiyisebenzelayo, I-US Ilungelo Lokwazi, wayeqaphe idokodo lasenkantolo ebelifuna izinto eziyimfihlo ukubikela umphakathi. Le nkampani ithe ukubika "ngemibhalo ekhethwe ngamakhekhe" kungahle kube "nokulimaza" ibhizinisi layo kanye nokungenzi kahle kwamacala, okungahle kungcolise iqula labasizi bejaji. "Ukuqulwa kwamacala emaphephandabeni akwenzi umphakathi," kusho uMonsanto.
Le nkampani icele iJaji uVince Chhabria ukuba ayalele ukuthi izinto zokutholwa zingafakwa njengezimbukiso noma ezinye izinhlobo zokugcwaliswa ezingabonakala emphakathini.
IMonsanto nayo yenziwa ukufayilwa okusha enkantolo ngoLwesihlanu, ibeka umbandela wayo wokuthi abukho ubufakazi be-Roundup nemikhiqizo ye-glyphosate "enamaphutha noma enobungozi ngokungenangqondo" futhi yathi imikhiqizo ihambisana "nayo yonke imigomo yokuphepha kahulumeni esebenzayo." Abukho ubufakazi be-carcinogenicity ku-glyphosate noma i-Roundup, kusho uMonsanto ekufayeleni kwayo.
Kwifayela elihlukile elenziwe ngoFebhuwari 8, kwafakwa iMonsanto isikhalazo senkantolo bethi ukuhlukaniswa kwe-IARC kwe-glyphosate njenge-carcinogen yabantu akuhambelani nombuzo wokuthi ngabe i-Roundup iwudale yini umdlavuza wabamangali. Indlela ye-IARC “ayinzima kangako” kunama-EPA ekuhloleni ubufakazi besayensi, futhi iziphetho ze-IARC “azithembekile ngokwesayensi,” ngokusho kwalo mfushane. UMonsanto utshele inkantolo ukuthi imibono ye-IARC noma i-EPA ayibalulekile odabeni olujwayelekile lwenkantolo ngoba abamangali kuzodingeka bethule ubufakazi obuvumelekile besazi obukhombisa ukuthi imikhiqizo yenkampani ibangele umdlavuza wabo.
Njengoba icala liqhubeka, umthetho lokho kungasiza iMonsanto nezinye izinkampani eziningi ezibhekene namacala ezenzo zabathengi kwahlongozwa ngoFebhuwari 9. "I-Fairness in Class Action Litigation Act ka-2017" (HR 985) yethulwa e-US House of Representatives nguSihlalo Wezobulungiswa Bezindlu uBob Goodlatte (R-VA.) Izintshisekelo zebhizinisi ezisekela umthetho zithi zizonciphisa amasudi angenamsebenzi futhi ziqinisekise ukuthi abamangali bathola inqwaba yemiklomelo yomonakalo kunokuba bacebise abameli abaletha lezo zinkantolo. Kepha abaphikisi bathi kuzokwenza kube nzima ngabantu abanemali elinganiselwe ukuthi baphonsele inselelo izinkampani ezinamandla enkantolo. Lo mthethosivivinywa uzosebenza kokubili ekusetshenzisweni okulindelekile nangesikhathi esizayo kanye namacala ezifundeni eziningi.
"Lo mthethosivivinywa wenzelwe ukuthi kuqinisekiswe ukuthi akukho zinyathelo zomphakathi ezingake zilethwe noma zibhekane nanoma ngubani," kusho uJoanne Doroshow, umqondisi omkhulu weCentre for Justice & Democracy. "Kungabhubhisa amalungelo omphakathi, ukungathembani, umthengi, ikakhulukazi zonke izenzo zaseMelika."
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane UBob Goodlatte, umdlavuza, Ikomidi Lokubuyekeza Ukuhlolwa Komdlavuza, EPA, Ukudla, glyphosate, UJess Rowland, Monsanto, Izinhlelo zeHhovisi Lezinambuzane, izibulala-zinambuzane ekudleni, RoundUp